Ra’isalwisaare Kheyre oo Fadeexad Culus lugaha lagalay & Isxambaar lagu helay …. – Shabakadda Puntland FM
You are here: Home WARARKA MAANTA Ra’isalwisaare Kheyre oo Fadeexad Culus lugaha lagalay & Isxambaar lagu helay ….
Ra’isalwisaare Kheyre oo Fadeexad Culus lugaha lagalay & Isxambaar lagu helay ….
Madaxii Amniga Ra’iisal wasaare Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa la sheegay in uu iska dhiibay mid kamid ah dalalka Yurub, kadib uu safarka u raacay waftigii Ra’iisal wasaare Khayre ee ka qayb galayey shirkii Dhaqaalaha Adduunka ee magaalada Davos ee dalka Switzerland.
Sakaalkan oo uu adeer u yahay Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa lagu magacaabaa Ayuub Cali, waxaana la xaqiijiyey inuu iska dhiibay Yurub oo uu ka hadhay waftiga Ra’iisal Wasaaraha oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho.
Xoggo aanu helnay ayaa sheegaya in sarkaalkan uu u gudbay dalka Belgium halkaas oo uu doonayo in uu ka helo magan gelyo, waxaana dad xogogaal ahi ay sheegeen in Ayuub la waayay mar qudha xili waftigaas kasoo duulaysay magaalada Davos ee dalka Switzerland.
Marar badan ayey dhacday in safarrada madaxda sare ay ka faa’iidaystaan shaqaalaha ka shaqeeya xafiisyadooda oo ay ku galaan qaarada Yurub, wuxuuna kiiskan noqonayaa kii ugu dambeeyay ee noocaasi ah ee ka dhaca xafiiska Ra’iisal wasaare Xasan Cali Khayre.